Afrika Mainty · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Jolay, 2018
Eoropa Andrefana 29 Jolay 2018
Zimbaboe: Andiana fakana an-keriny politika
Zimbaboe 29 Jolay 2018
Mpikambana maro tao amin'ny MDC sy ny ZPP no nalaina an-keriny tao Zimbaboe, anisan'izany ny filohan'ny Zimbabwe Peace Project, i Jestina Mukoko.
Angolà: Ankizy maro ampangaina ho manao famosaviana
Angola 28 Jolay 2018
Efa hatramin'ny faran'ny taona 90, iharan'ny fampijaliana sy famonoana ny ankizy maro ao Angolà izay ampangain'ny fianakaviany ho mpamosavy. Efa miezaka ny hamaha ny olana ny fanjakana ankehitriny.
Tontolo iainana : Resaka rano ao Afrika Atsinanana
Afrika Atsimo 28 Jolay 2018
Mety hiatrika krizin-drano i Afrika Atsimo ary miady ny nosy Migingo kosa ireo firenena afrikana telo mifampizara ny farihy Victoria.
Kenyà 27 Jolay 2018
Miteraka voka-dratsiny maro ho an'ny ireo biby lehibe hafa ny fomba fanjonoan'i Japana krila ary miha-manjavona noho ny fitrandrahana azy diso tafahoatra ny hazo santal ao Kenya, Fehiny: samy misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny toetrandro avokoa ireo.
Kenya : Ny 4×4 ampiasain'ireo mpiasan'ny ONU
Mahatezitra blaogera sasany ny fampiasan'ny mpiasan'ny ONU fiara 4x4. Mizara sary mikasika izany izy ireo ao amin'ny blaoginy, ary namorona vondrona mihitsy aza tao amin'ny Flickr, "Kick The Habit" [amin'ny teny anglisy].
Afrika Avaratra: Fijirihana sy Famotehana tranonkalan'ireo antoko politika mpanohitra
Libia 27 Jolay 2018
Mihalasa lasibatra manokan'ireo mpijirika (jiolahy informatika) ny tranonkalan'ny mpanohitra ao amin'ireo firenena any Afrika Avaratra, indrindra ao Tiorkia, Libia, sy Maoritania.